स्थानीय तहमा कार्यरत एक इन्जिनियरको अनुभव : ‘हामी सामाजिक बन्नुपर्ने रहेछ’ - Engineers Post
आइबी चौधरी April 17, 2021
सुदूरपश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुर जिल्लाको शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा कार्यरत एक इन्जिनियर हुन्, लोकेन्द्रराज भट्ट । उनी नगरपालिकाको योजना शाखामा कार्यरत इन्जिनियर हुन् । उनीसँग स्थानीय तहमा इन्जिनियरलाई केकस्ता समस्या र चुनौती छन् भन्नेबारे गरिएको ५ प्रश्न :
स्थानीय तहमा इन्जिनियरलाई काम गर्न कत्तिको चुनौती छ ?
थुप्रै चुनौती छन् । किनभने सबै मान्छे एकै प्रकारका हुँदैनन् । सबैको आ–आफ्नो धारणा हुन्छ । सबैभन्दा पहिले ती सबैको धारणालाई बुझेर काम गर्न सक्नु मुख्य चुनौती हो । धेरै जसो काम उपभोक्ता समितिबाट हुन्छन् । तर, कहिलेकाहीँ उपभोक्ता समितिबाट काम कम हुने हुन्छ । त्यतिबेला उपभोक्ता समितिले मेरो काम पूरा भएको छ भनेर बिलिङ गरिदिनुपर्यो भनेर इन्जिनियरलाई गुहार्छन् । त्यतिबेला विभिन्न किसिमका दबाब आउँछन् । तर, हामी इन्जिनियरले मात्रै भनेर हुँदैन । नगरस्तरीय अनुगमन समितिले अनुगमन गर्नुपर्छ । समितिले ठिक छ भने पछि हामीले पनि त्यही नै गर्नुपर्छ ।
कहिलेकाहीँ यस्तो अवस्थामा राम्रो काम नभएको बेला पनि पास गर्नुपर्ने समस्या आउँछन् । तर, पनि हामीले सबैलाई कन्भिन्स गरेर काम गरिरहेका हुन्छौं । त्यसैले यस्ता समस्याको सामना कसरी गर्ने भन्ने कुरा इन्जिनियरको खुबीमा भर पर्छ । इन्जिनियर भएर मात्र हुँदैन । उसमा खुबी पनि हुन जरुरी छ ।
शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा इन्जिनियरलाई काम गर्न कतिको सहज छ ?
शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा हामी अहिले २ जना इन्जिनियर छौं । यो यसका लागि पर्याप्त नै हो । काम आफैंमा चुनौतीपूर्ण हुन्छ । कामलाई चुनोतीका रूपमा लियौं भने चुनौती नै हुन्छ । र, त्यसलाई आफू अनुकुल लिएर रमाएर काम गर्न सकियो सहज हुन्छ । त्यसैले स्थानीय तहमा अहिले खासै त्यस्तो समस्या म देख्दिनँ ।
इन्जिनियरले कुनै पनि भौतिक संरचनाको निर्माण गर्दा प्राविधिक दृष्टिकोणभन्दा प्रशासन दबावमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ भनिन्छ नि ? यस्तो अवस्थामा इन्जिनियरले कसरी काम गर्छन् ?
काम गर्न दबाब छैन भन्न मिल्दैन, दबाब छ । तर, हामीले त्यतिबेला प्रशासनिक व्यक्तित्वहरूलाई सबै कुरा बुझाउँछौं । सुरुमा उहाँहरू जेजस्तो भने पनि प्राविधिकले भनेको मान्छन् । त्यसैले मलाई के लाग्छ भने हामी स्थानीय तहमा काम गर्नका लागि ‘पेवर’ इन्जियिनर बन्नु हुँदैन । इन्जिनियर सामाजिक बन्नुपर्ने रहेछ । अर्थात् इन्जिनियरिङसँगै सामाजिक ज्ञान हुनुपर्ने रहेछ ।
हामीले ‘स्टिमेट’ मा मात्रै केन्द्रित नभएर कस्तो किसिमको परिस्थिति छ र हामीले त्यस्तो अवस्थामा कस्तो भूमिका निभाएर आफ्ना सिनियर (मेयर/उपमेयर) माझ योजना प्रस्तुत गर्ने हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । हामीले सामाजमा भएका सबैको मनोभावना र व्यवहारिकतालाई बुझ्नुपर्ने रहेछ । र, मान्छेको चाहनाअनुसार योजना दिन सक्यौं भने त्यो निकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
यसरी काम गर्दा स्थानीय तहमा इन्जिनियरलाई काम गर्न अहिलेसम्म खासै समस्या आएको मैले पाएको छैन । त्यसमाथि शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा इन्जिनियरलाई खासै त्यस्तो दबाव छैन । हामी स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाएका छौं ।
स्थानीय तहमा जोडिएपछि तपाईंले केकस्ता समस्या भोग्नुभयो ?
त्यस्तो खासै केही छैन । म बरु खुशी छु । किनभने सबैले मेरो काममा सघाइरहेका छन् । स्थानीय सरकार आफैंमा एउटा स्वतन्त्र सरकार हो । स्थानीय सरकारले भनेको केही कुरा हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ । हामीले नियम कानुनलाई नमान्ने कुरा पनि हुँदैन । जे होस् हामी प्राविधिकले भनेको कुरा सबैले मान्छन् । यो नै ठूलो कुरा हो ।
इन्जिनियरको हाकिम इन्जिनियर नै हुनुपर्छ भन्ने इन्जिनियरहरूको माग छ । यसमा तपाईंको भनाइ के छ ?
दलित, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, आदिवासी सबैलाई बजेट छुट्याउनुपर्छ भन्ने बजेटको अवधारणा छ । नगरपालिका योजना शाखा मात्रै ठूलो कुरा होइन । यो एउटा भाग मात्रै हो । यो बाहेक, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलगायत थुप्रै शाखा हुन्छन् । ती सबै कुरा एउटा इन्जिनियरले थाहा नपाउन सक्छ । त्यसैले यसबारे जानेबुझेको एउटा अनुभवी मान्छे नै प्रशासनमा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ । त्यसैले इन्जिनियरका लागि मात्रै सोचेर होइन कि सबैलाई समान किसिमले व्यवहार गर्न सक्ने हाकिम हुनुपर्छ । चाहे त्यो इन्जिनियर नै किन नहोस् ।